Ikhaya lomndeni ngasemfuleni i-Kyrönjoki - I-Airbnb
Ikhaya lomndeni ngasemfuleni i-Kyrönjoki
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Tiila
U-Tiila Ungumbungazi ovelele
Indlu yendabuko yendoda esogwini lomfula omuhle we-Kyrönjoki. Ifanele izihambi ezihamba zodwa, izithandani nemindeni enezingane. Izilwane ezifuywayo zamukelekile. Amakhilomitha angu-25 ukusuka enkabeni ye-Seinäjoki.
Indlu yamapulangwe yendabuko ngasemfuleni omuhle i-Kyrönjoki. Ilungele izivakashi ezihamba zodwa, ezithandani nasemindenini. Futhi izilwane ezifuywayo zamukelekile. Kutholakala emakhilomitheni angu-25 ukusuka enkabeni yedolobha lase-Seinäjoki, isikhathi sokushayela kusuka e-Seinäjoki cishe uhhafu wehora, kusuka e-Vaasa ihora elilodwa.
Indlu yendoda ehlotshiswe ngokwesiko ngasemfuleni omuhle i-Kyrönjoki. Ifanele izihambi ezihamba zodwa, izithandani nemindeni enezingane. Engadini enkulu engaphesheya komfula kuhle ukuphumula nokulalela umsindo wama-feids aseduze, ngokwesibonelo. Egcekeni kunendawo enkulu yokugijima, indlu yokudlala nokubhukuda, ngaphakathi futhi indawo yokudlala kanye namathoyizi amaningi ezingane, okwenza kube indawo enhle kakhulu yemindeni enezingane.
Indlu yamapulangwe yendabuko ngasemfuleni omuhle i-Kyrönjoki. Ilungele izivakashi ezihamba zodwa, ezithandani nasemindenini. Ingadi enkulu ngasemfuleni ilungele ukuphumula. Indawo yinhle futhi yezingane, kunendlu yokudlala kanye nokushwibeka ngaphandle, kanye nomjikelo ekhishini wezingane namathoyizi amaningi.
omatilasi abangu- 2, Umbhede wengane e-1, 1 umbhede oyidabuli omncane
4.52 out of 5 stars from 99 reviews
4.52 · 99 okushiwo abanye
Indlu isogwini lomfula i-Kyrönjoki, ngakolunye uhlangothi lomgwaqo kunenkundla yezemidlalo. Indawo ithule kakhulu futhi ayinabantu abaningi endaweni yendlu. Abantu basendaweni banobungane kakhulu futhi bazokujabulela kakhulu ukusiza izivakashi zami uma ngingekho.
Izivakashi zingathintana nami nge-Airbnb, ngomyalezo, noma zingishayele ucingo. Ngiyajabula ukutshela ngamathuba okubuka nokuqwala izintaba esifundeni sase-Seinäjoki.
Izivakashi zingathintana nami ngengxoxo ye-Airbnb, i-SMS futhi nakanjani ngokushayela ucingo. Ngiyajabula ukusiza uma izivakashi zidinga amacebiso mayelana nokubukwa kwendawo yase-Seinäjoki nezindawo ezingazivakashela.
UTiila Ungumbungazi ovelele